MARA Iris Tornado F-3 FSX & P3D - Rikoooo
downloads 23 613
Iris Flight Ịme anwansị Software
Kpụzi agbazi nke Tornado F.3 si IRIS Simulation, ụda ọhụụ, mgbazi nke VC na ọtụtụ ndozi ndị ọzọ (lee ọgụgụ). Na-agbakwunye utịpụta afterburner, mmegharị maka Prepar3D v2 +. Jiri bọtịnụ maka flaps iji dọọ / weghachite nku geometry na-agbanwe. Enyere ya otutu ihe ndozigharị na ụdị ngwa agha dị iche iche (bọmbụ, agba, wdg).
Panavia Tornado ADV ụgbọ elu bụ British twin-engine interceptor, Panavia Tornado na mbipute. Tupu March 2011, Tornado ADV na-eje ozi na Royal Air Force nke bụ onye isi ọrụ nke ụdị agha a.
Onye edemede: Iris Flight Ịme anwansị Software